VaChihuri Vanoramba Kusangana neJOMIC
Zvita 02, 2011
Mukuru wemapurisa, Police Commissioner General, VaAugustine Chihuri, avo vakange vadaidzwa neJOMIC kuti vauye kuzotaura pamusoro pemapurisa ari kunzi ari kupeta maoko panoitwa mhirizhonga, vatsika madziro vachiti havasi kuzoenda kunosangana nevakuru vekomiti iyi.
JOMIC yakatuma gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, mwedzi wapera kuti vanoudze VaChihuri nezvemusangano wavaifanirwa kusangana nekomiti yeboka iri.
Nhengo yeJOMIC, Muzvare Thabitha Khumalo, vanoti ichokwadi kuti VaChihuri vari kuramba kusangana neJOMIC vachiti zvavari kuita izvi, kuzvidza kuri pachena mitemo yenyika.
VaChihuri vakaudza vakuru vemapurisa kuDarwendale neChitatu kuti vanhu vari kuda kuvandudza mashandiro emapurisa vari kuda kufadza nyika dzekunze. Vakatiwo vanhu vanokonzera mhirizhonga vanhu vezvematongerwo enyika uye ivo havadi kuzvuvirwa mumadhaka ane chekuita nezvematongerwo enyika. VaChihuri vakati semaziviro avo, mapurisa anoshanda asina divi raanorerekera.
VaChihuri vakabuda pachena kare kuti havasi kuzotambira mutungamiri anosarudzwa nevanhu asina kuenda kuhondo. Vakati nyika ikasarudza munhu asina kuenda kuhondo, vanobva varegedza basa.
Nyanzvi munyaya dzezvekuchengetedzwa kwenyika, uye vakamboshanda muchiuto, Retired Lieutenant Colonel Martin Rupiya, avo vave kushanda nesangano reInstitute for Security Studies muSouth Africa, vanoti VaChihuri vakabuda kare kuti inhengo yeZanu-PF nekudaro hapana chinoshamisa pamashoko avo ekuramba kuremekedza JOMIC.